अनुसन्धान कागज को दर्ता: निर्देशन
त्यसैले, यो खुसी र लामो प्रतीक्षा क्षण आएको छ: तपाईं थियोसिस लेखन सकियो, र आफ्नो पर्यवेक्षक द्वारा एक "राम्रो" पाए। एक रोमाञ्चक समय सुरक्षा को अगाडी र अन्तमा, संस्थान देखि स्वतन्त्रता। तर त्यहाँ थियो: माथि टाउको र फेरि माथि तपाईंले केही साना कुराहरू बदल बनाउँछ धेरै विष जीवनका सुख एक foretaste। यो जोगिन, विशेष ध्यान गर्ने थियोसिस सही दर्ता भुक्तान गर्नुपर्छ।
शिक्षकहरू हरेक बिन्दु अपनाउँछन् गर्न अप्रिय सुविधा छ, र यो कुनै दुर्घटना हो। तथ्यलाई आयोग हरेक सदस्य जस्तै trifles कम स्कोर लागि प्रयासरत वा बस रंग मा एक रक्षक ड्राइव छ। स्नातक को happiest दिन overshadow छैन ताकि, सबै विवरण विचार गर्नुहोस्।
उचित शीर्षक पृष्ठ को डिजाइन को थियोसिस को - सफलता पहिलो कदम। यो हेडरमा आफ्नो स्कूल को सही नाम संकेत आवश्यक छ। कहाँ प्राप्त गर्न? प्रत्येक विश्वविद्यालय को साइट यो जानकारी, र केही विश्वविद्यालयहरु पनि प्रक्रिया नमूनाहरू फैलियो। यस मामला मा, तपाईं बस ढाँचा मा सबै के गर्न छ। नमूना छैन भने, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि कवर पृष्ठ शहर को केन्द्र र पृष्ठ को तल वर्ष मा काम को शीर्षक, साथै जो बाहिर व्यक्ति को नाम, र जसले जाँच व्यक्ति हुनु पर्छ। आफ्ना सबै regalia र शीर्षक साथ वैज्ञानिक सल्लाहकार सर्वश्रेष्ठ बिन्दु।
अनुसन्धान को दर्ता काम हरेक पृष्ठ ट्र्याक गर्न आवश्यक छ। यो फुटनोटको र सन्दर्भहरू यस को लागि जो इन्टरनेटमा हेर्न र आफ्नो प्रशिक्षक संग जाँच गर्न राम्रो छ, राज्य स्तर छन्, सही जारी गरिएको छ कि महत्त्वपूर्ण छ। विश्वविद्यालयमा तिनीहरूले हरेक दिन कागजी कार्रवाई, पाठ्यक्रम र डिप्लोमा सामना गर्न छ किनभने, ठ्याक्कै सबै थाह छ।
प्रत्येक पृष्ठ बायाँबाट र सही किनारा बाट दायाँ इन्डेन्ट सम्मान गरिएको हेर्नुहोस्। सामान्यतया, मानक, padding डेढ र दुई र आधा सेन्टिमिटर, क्रमशः छ, तर तपाईंको विद्यालय आफ्नै आवश्यकताहरु हुन सक्छ। बनाउने थियोसिस - laborious काम र यथासक्य ध्यान आवश्यक छ, त्यसैले सटीक नियम स्पष्ट गर्न अल्छी हुन छैन!
डिजाइन काम तुलना लेखन डिप्लोमा त गाह्रो छैन जस्तो हुनेछ। भन्ने उल्लेख मात्र एक सूची छ! मात्र यो धेरै व्यापक छ, त्यसैले यसलाई देखि अझै पनि र सबै पुस्तकहरू असमर्थ प्रत्यक्ष देख्न र उत्पादन डाटा अधिलेखन गर्न काम बहुमत छैन। सावधान रहनुहोस्: प्रकाशन र प्रयोग सामाग्री को सही पृष्ठ को वर्ष आवश्यक छ!
ठीक एक परिचय र निष्कर्षमा व्यवस्था गर्न नबिर्सनुहोला। दुवै भागहरु मा आफ्नो काम को लक्ष्य र उद्देश्य विचार गर्नुपर्छ, तर परिचय मा तपाईं हासिल गर्न चाहनुहुन्छ के कुरा गर्नुपर्छ, र अन्त मा - तपाईं यो हासिल गर्न सक्षम थिए। यो उपाधि एक नवीन भाग हो र यो यति मूल्यवान बनाउँछ किनभने, आफ्नो काम को सान्दर्भिकता उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला।
अध्याय सामाग्री को Assimilation सुविधा गर्न खण्डहरू भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, तर तपाईं विशेष लामो छैन भने, यो अनुच्छेद बिना गर्न सम्भव छ। काम मूल्य भए, प्रत्येक पृष्ठ सबै फुटनोटको संग, यो विभिन्न स्रोतहरूबाट मा गर्न मनमोहक छ, कम से कम एक टिप्पणी हुनुपर्छ। र एक राम्रो र योग्य भाषा लेख्न नबिर्सनुहोस्! अहिलेसम्म पहिलो स्थान मा आयोग अर्थ मा र थियोसिस को डिजाइन मा छैन जस्तो देखिन्छ। शुभकामना छ!
Komsomolsk-मा-Amur राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय (KnAGTU): ठेगाना, विभाग, संरक्षित
NGPU, नोवोसिबिर्स्क, विभाग र विशेषता
औंठी किन बोधो आफ्नो खुट्टा मा? गरेको बुझ्न गरौं!
Trykhopol के हो